Tatitry ny Banky iraisam-pirenena : ratsy fitantanam-bola ny fanjakana, taona 2015 | NewsMada
Tatitry ny Banky iraisam-pirenena : ratsy fitantanam-bola ny fanjakana, taona 2015
Par Taratra sur 12/04/2016
Nanao tombanezaka momba ny raharaha ara-toekarena nandritra ny taona 2015 ny ekipan’ny Banky iraisam-pirenena (BM) eto an-toerana. Tsy tratra ny tanjona napetraka, araka ny tatitra nataon’ny BM. Nokianin’ny BM mafy, omaly, ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon’ny fanjakana sy ny fitohizan’ny fanampian’ny fanjakana ny orinasam-panjakana.
Olana iray misakana ny fanarenana ny toekarena ny nandritra ny taona 2015, ny faharatsian’ny fitantanana any amin’ny raharaham-panjakana samihafa, araka ny fanazavan’ny BM. Ohatra iray ny fomba fandaniana ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana, izay tratra aoriana loatra. Manjary misy fiantraikany amin’ny famoaham-bola izany. Araka ny fahitan’ny BM azy, ny volana desambra 2015 vao tafavoaka ny 40 % amin’ny fandaniana. « Izay fivangongoan’ny volam-panjakana mivoaka amin’ny faran’ny taona izay, miteraka tsy fisian’ny fanaraha-maso ara-dalàna », hoy Razafimanantsoa Faniry, mpahay toekarena ao amin’ny BM.
Raha naroso amin’ny fiandohan’ny enim-bolana voalohany ao amin’ny Antenimierampirenena ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana, tsy nolaniana izany raha tsy 21 novambra. Tsy vao sambany ny fahatarana ny fandaniana ny tetibolam-panjakana. “Misy ifandraisany amin’ny tetibola eo am-pelatanan’ny fanjakana ihany izany fahatarana izany”, hoy Razafimanantsoa Faniry.
Tsy misy fanaraha-maso
Koa tokony hiezaka ny fitondram-panjakana hanatsara ny fomba fitantanana, mba hampisy fahatokisana. Notsikerain’ny BM mafy ihany koa ny faharatsian’ny fomba fiasa eo amin’ny fanaraha-maso. Misy ny lalàna momba izany nefa tsy ampiharina, tsy mihatra, araka izany koa ny sazy. Mifangaro ny andraikitry ny sampana mpanara-maso rehetra, ankoatra izany ny tsy fahampian’ny fitaovana eo amin’ireo mpanara-maso, raha ny fanazavan’ny BM ihany.